December 2012 - iftineducation.com
2 Men Married 1 Girl iftineducation.com – Dunidan aynu kunoolnahay waxa aad ku arkeysaa wax kaa yaabiya Ama kaa naxiya sidoo kale dhacdooyinka ka dhaca caalamka waa isdaba joog. Amore iyo Kunden oo ah Labo Nin oo Walaalo ah waxa ay udhasheen Dalka Hindia iyagoo labadooda ay ka dhaexeeyso Hal Gabar oo ay wada qabaan Ama Xaas U ah. Sida ay…
Diyaano iftineducation.com – Muuqaalo aan horay loogu arki jirin gabdhaha muqdisho ayaa maalmahan waxaa la arkayaa iney diirka iska dhigeen oo ay is cadeeyeen iyagoona isticmaalaya daawooyin leesku dardaray oo iyaguna dhibaatadooda watta . Gabdha ku dhaqan magaalada muqdisho sanadkan sida ay uwada isticmaaleen walxa leesku caddeeyo ma jirin si lamida ah sanadkan . Qaar katirsan wiilasha ayaa iyagu usababeynayo iscaddeynta…
Fanaaniinta iftineducation.com – Fanka oo lagu tilmaamo inuu yahay isku jir ka kooban balwad ama hiwaayad ay dadka qaarkiis leeyihiin iyo dareen lagu soo bandhigo hadba marxalada la joogo, ayaa wuxuu soo maray heerar kala duwan ilaa uu maanta ka joogo casrul dahabigii ugu qaalisanaa ee soo mara, maxaa yeelay waxa uu xilligaan gaaray horumarkii ugu caalamisanaa ee ay abid ku…
iftineducation.com – Qaar kamid ah Warbaahinta Caalamka ayaa soo bandhigay Nin indho yar ah oo Masas Waa weyn inta meel keenay hadana isku duu duubaya isagoona dareemeyn wax cabsi ah ama saameyn ay ku reebayaan Masaskaasi. Masaska ayaa intooda badan waxaa ay yahiin nuuca looyaqaano Albiino Bayson ee Dalka Baama laga helo, ninkaan waxaa uu sheegay in ay qeyb ka…
iftineducation.com – Banaanbaxyo ka dhacay Boorame maanta ayaa looga soo horjeedaa inaan xilka loo dhaarin dadkii lagu doortay doorashadii Saylac ee Somaliland. Natiijooyinkii doorashada kadib, ayaa la daahiyay in dadkii ku soo baxay doorashada Saylac in loo dhaariyo xilalkoodii. Arrintan aya aka xanaajisay dadka reer Boorame oo bannanbax sameeyay. Masuuliyiin ka tirsan Somaliland oo booqday Boorame ayay dadkii banaanbaxayay rabshado…
iftineducation.com – Tvga Horn Cable barnaamij uu ka samayay diyaar garowga sanadka cusub, waxaa si layaab leh hal mar Microfonka ula wareegay fanaanada Farxiyo Fiska oo dhagaha ka qabsatay kana yaabisay labada fanaan ee kala ah Ikraan Caraale Iyo Fanaanada Nimco Yasiin. Fanaanada Fiska ayaa ah fanaaniinta lagu tiriyo in ay leedahay cod aad u dheer oo marna lala tartami karin…
iftineducation.com – Fanaanka reer North America Mahad Indhodeero ayaa soo saray muuqaalka heesta Sir Jaceyl, waxaana u duubay soo saaraha weyn ee Sj Hassan oo inta badan heesaha u duubo ama u soo saaro fanaanka luuqada English ku heeso ee KAY. Heestaan ayaa leh muuqaal aad u qurxoon oo ka duwan muuqalada inta badan ay duubaan soo sarayaasha Soomaalida oo badanaa…
iftineducation.com –Tan iyo markii ay ka baxday magaalada Muqdisho gacanta dowladii kacaanka uu hogaaminaayey ALLAHA u naxariistee Maxamed Siyaad Barre Muqdisho waxay la saaxiibtay dagaalo sokeeye oo keenay magaaladii caasimada aheyd iney isku badasho duur laakiin wixii ka dambeeyey sanad ka hor markii ay xoogaga Al-Shabaab ay sheegeen iney xeelad dagaal uga baxeen Muqdisho ayaa waxaa ku soo noqotay amni…
iftineducation.com – Musharraxa Madaxwaynaha Maamulka Juba Land State Of Somaliya Eng Bashiir Axmed Maxamed ayaa Soo dhaweeyay Isfahanka Dhaxmaray Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamuka Jubaland state of somaliya kaasoo Ku Dhamaaday Isfahan . Sidoo kale Murashaxa Madaxwaynaha Juba Land State Of Somaliya ayaa soo Dhaweeyay Booqashadii ay ku tageen Wafdigii uu Hogaaminayay wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane C/kariin…
iftineducation.com – Dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ka dib garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde International Airport waxa uu in mudo ah u afduubanaan jiray hogaamiye kooxeedyo ka dhigtay xarun ciidan waliba aanan aqoon horumarka Nabada. Muuqaal ahaan garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho waxa uu garoomada Caalamka dheeryahay ugana wanaagsan yahay Badii ayaa gees kaga taal waxaana wax yar u…